के अब नेपाली जनताले ठुला पार्टीलार्इ एक र साना पार्टीलाई एक भ‍ोट देलान् त ?
माधब पाैडेल "असल यात्री" - पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई केलाउने हो भने नेपालका प्रमुख चार दलहरुले अाफ्नो मात्र प्रभुत्व जमाउन खोजेको ज्वलन्त उदाहरण थ्रेस होल्ड प्रणाली विधेयक पास गराउदा तीन दलको एकै मतबाट छर्लङ्ग सावित भैइसकेको छ ।
बामपन्थी होस् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन यि दुवै सत्ता मोहले नाटकिय ढंगबाट गठित भएका हुन । निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने मुहारहरु हेर्ने हो भने पनि पुरानाको नै हावी देखिन्छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने जुनसुकै दलले पनि नँयालाई अबसर दिने कुरा केवल खोस्रो कागज अनि जनतामा प्रवाह गर्ने ध्वनिमा मात्र सिमित छ । ३३% महिला सहभागिताको कुरा अाफ्नो घोषणा पत्रमा मात्रै सिमित देखिन्छ । कानुनमा नलेखिएकै कारण सबै दलहरुले महिलालाई पछाडि पार्न सफल भएका छन् ।
समानुपातिकमा केहि जनजातिको नाम बन्दसुचिमा पारेर ठुला दलहरुले भोट तान्ने दाउ फ्याकिरहेका हुन भनी बिश्लेक्षण गर्दा खासै फरक नपर्ला । स्थिर सरकारको बहानाको नाममा भएको गठबन्धनले दिगो रुप लिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? जनता यसको सहि जवाफ खोज्दैछन् ।
मधेस अान्दोलनले जन्माएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेसमा अाफ्नो छुट्टै प्रभुत्व जमाउन सफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । रविन्द्र मिश्र सयोजंक रहेको विवेकशील साझा पार्टी र डा.बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नँया शक्ति पार्टिलाई यो निर्वाचनमा ३% मतको सिमा पार गराइ राष्ट्रिय पार्टी बनाउन युवाहरु र बुद्धिजीवीहरु दौडधुप गरिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष तर्फ केहि ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएको सो पार्टीहरुले समानुपातिक तर्फ धेरै भन्दा धेरै मत ल्याउन जरुरि हुन्छ । के २१ शताब्दीका हामी नेपाली जनताले अाफ्नै पुरानै दाई दिदिलाई एक भोट दिएर नँयालाई समानुपातिक तर्फको एक भोट देलान् त ? यदि यसो हुन सकेमात्र यी दुई हस्तिहरुले देखेको सपना साकार होला नत्र पुरानै दलहरुले पुरानै शैलीमा कहिले दक्षिण त कहिले उत्तरको इशारामा देशको बागडोर हाकिरहने छन् ।